IiROM zeMIUI | I-Androidsis
el_uliulius | | i-ROM, Tutorials
Siqala ngeziseko. Kulabo abangaziyo ukuba yeyiphi iROM ephekiweyo, masithi I-ROM yindlela yokusebenza yesiphelo sethu esithandekayo. Ifektri yeROM iya kuba yi-Android uqobo eyenzelwe yona nguGoogle kwiNexus, ebonelela ngeHTC ngeziphelo zayo okanye iSamsung. Oku kunokuba yintsusa, iROM yefektri, nantoni na ofuna ukuyibiza. IiROM eziphekiweyo zezo ziphuhliswe ngabasebenzisi boluntu, Njengoninzi lwe XDA, amakhwenkwe CyanogenMod okanye ezo IHTCMania. Ngokukodwa namhlanje sithetha nge-MIUI (Olunye uguqulelo sele luphawuliwe). Sele uyazi ukuba umba wokufaka iiROM usebenza njani, kwaye ukuba awazi, IHTCMania o XDA igcwele iitutorial kwisiphelo sakho esithile.
Le ROM iphuhliswa luluntu lwaseTshayina, kwaye fumana uhlaziyo ngokukhawuleza okukhulu, ngqo, ngeveki ingxelo entsha iyaphuma. Isasetyenziswa Froyo, nangona Uhlaziyo lwe-OTA lweNexus One, kulindeleke ukuba kungekudala baya kufudukela Gingerbread. Kukho abaphuhlisi abaliqela abaguqulela kwiSpanish, nangona kuhlala kukho into ephandle apho ingxelo yabasebenzisi, ukuyisombulula nokuguqula iROM 100%. Azisoloko zizinto ezinzulu kakhulu, nangona ndikhumbula kube kanye, ndongeza umnxeba, ndifumene imenyu ngesiTshayina, kwaye kuye kwafuneka ndibhale phantsi inombolo kuyilo lwe inbox.
Ineenguqulelo ezizinzileyo zezi terminals:
Ngokumalunga nokusingqongileyo kwemizobo, bane-Launcher, ene-dock esezantsi kunye neidesika ezi-6 ngokungagqibekanga. Ukuqwalaselwa kunjalo. Uyaziwa nguye Iwijethi yemozulu enewotshi, efumaneka kwiNtengiso. Ujongano lwayo lukhumbuza kakhulu ii-IOs. Uninzi lunje, abanye abayithandi kwaphela (iseva phakathi kwabo) I-ROM iya kuguqulelo lwayo 1.2.25 (umhla wama-25 lusuku lokumiliselwa, owesi-2 nguFebruwari). Kwinguqulelo yamva nje balungile:
Iingxaki zokufumana i-sms
Iingxaki ngewindows ezivelelayo
Iingxaki zevidiyo nevidiyo kwiscreen sokutshixa
Iingxaki zokubonisa abafowunelwa abasandula ukujongwa
Iingxaki zonxibelelwano zeSIM
Ezinye iingxaki ngeBluetooth
I-FC kuluhlu lwabamnyama
Iingxaki ngomxholo, iwotshi kunye lodonga
Ezinye iingxaki kwibar yomgangatho kunye nokukhiya isikrini
Yongeza imisebenzi emitsha kwisidlali-mculo
Kwaye oku kuphela kuhlobo 1.2.19 (ukusuka ngoFebruwari 19). Ufumana umbono wesantya sangaphambili sale ROM. Ndayivavanya kwinguqulo 1.1.28 yoMnqweno wam. Ukusetyenziswa kwebhetri kuphezulu kuneCyanogenMod. Isantya seROM sasisihle kakhulu. Yenza ngokwezifiso ngaphandle kokukhuphela nantoni na, kunye nemixholo, ii-icon kunye nee-watermark ezininzi. Kodwa andiqinisekanga. Isantya se-CM7 kunzima kakhulu ukufezekisa. Ndiyayithanda imbonakalo ecocekileyo ngcono, ngaphandle kwemifanekiso emininzi okanye ii-icon ezinamathelayo. Thembele kwi iiwebhu Ukutshintsha, imixholo, ii icon kunye nayo yonke into onokuyicinga. Ewe yonke into inokwenziwa ngokwezifiso kwi-Android. Kodwa andifumani ngqondo yokuba ne-MIUI kunye ne-ADW ukuba yile nto ndinayo nge-CM7. Yile nto kanye ndicinga ukuba isuti eyomeleleyo ye-MIUI kubalandeli bayo, ujongano. Zininzi iiROM ezisekwe kuyo, ezinje nge le ye-Nexus One eqokelelwa ngumsebenzisi we-HTCMania.
Ngaba unesibindi sokuzama?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » i-ROM » IiROM zeMIUI
Ndicinga ukuba ngoku iCyanogenMod (7) izinze ngakumbi kune-MIUI. Nangona kubonakala kunomdla. Kufuneka kuqatshelwe ukuba i-CM7 izisa iGingerbread, kwaye sele ndiyonwabela kwifowuni yam.
Zikwatolikwa kwaye zikhawuleza kakhulu, kuba i-HD2 ene-Android, intle kakhulu, bendikunye nabo ukusukela ekuqaleni kukaDisemba no-Acura, omnye wabapheki ababalaseleyo baseSpain, ebahlaziya rhoqo kwi-Htcspain. Ngoku ndiphethe i-21.1.1, kuba eyokugqibela eyakhutshwa yi-Acura yayingeyiyo kwaphela, kwaye le ihlazo, i-100%.
Molo, andazi ukuba uyazi ukuba i-gingerbread esemthethweni (i-nexus enye) i-ROM ifumaneka ukusukela nge-24 kaFebruwari ukukhuphela kunye nokufaka ngokufumana kwakhona. Zonke ezisesikweni kunye nexesha elide ngaphambi kwe-OTA ... ngakumbi kuthi kuthi sinevodafone.
Kuya kufuneka ubeke iimodeli ezininzi, ikwakhona i-xperia x10 ndingena kwezinye iiselfowuni ezininzi
Ungabandisa njani ubomi beebhetri
Iiapps ze-Android ezisebenza kwiiBlackBerry